रविन्द्र अधिकारीको निधनपछि सामाजिक संजालमा विकृत मानसिकता | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
रविन्द्र अधिकारीको निधनपछि सामाजिक संजालमा विकृत मानसिकता
प्रकाशित मिति : 28 February, 2019
फागुन १६, काठमाण्डौ । आशा गरिएका रविन्द्र अधिकारीको निधन भइसकेपछि देश नै शोकमा छ । हरेक नेपालीले चिनेको र देशका लागि राम्रो काम गर्न सक्नेको छवी बनाएका अधिकारीको अकल्पनीय निधनलाई स्विकार गर्न कठीन छ । तर सत्य यही हो कि अधिकारीले संसार छोडिसके ।
पछिल्लो समय हरेक घटनालाई सामाजिक संजालले छताछुल्ल बनाइदिने गरेको छ । कसैको सफलतामा शुभकामना होस् वा निधनमा श्रद्धान्जली । गाली गर्न होस् वा प्रशंसा ।
हरेक विषयवस्तुबारे आफ्ना धारणा राख्ने माध्यम बनेको छ सामाजिक संजाल । प्रयोगकर्ताको सक्रियताका हिसाबले संजालमध्ये पनि फेसबुक पहिलो नम्बर र टुइटर दोस्रो नम्बरमा पर्छ ।
बुधबार मन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित ७ जनाको निधन हुनेगरी भएको हेलिकप्टर दुर्घटनापछि पनि सामाजिक संजाल निकै सक्रिय रह्यो । अर्थात सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताको सक्रियता बढ्यो । विशेषगरी दुर्घटनाको जानकारी दिनेदेखि मृतकप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्नेहरु बढि देखिए ।
तर त्यही सामाजिक संजालमा केही अमानवीय स्वभावका मानवहरु प्नि भेटिए । जसले देशका मन्त्री, आशालाग्दा नेताको निधनमा खुशी मनाए । ति अमानवीयहरुमा सायदै कहिल्यै मर्दिन भन्ने भ्रम परेको पनि हुन सक्छ । पशु स्वभावलाई यस्तो भ्रम हुनु स्वभाविक नै हो ।
बुधबार दुर्घटनामा परी दिवंगत भएका मन्त्री अधिकारीका पनि केही कमजोरी होलान्, । जुन सामान्य मानवीय गुण हो जसलाई शोकको बेला कोट्याउन जरुरी छैन ।
कसैले त ‘वाइडबडीको पाप कराएको’ भन्नसम्म भ्याए । हो, पछिल्लो समय उनीमाथि बाइडबडी खरिदका क्रममा गल्ती गरेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको थियो । तर त्यो आरोप मात्रै थियो, सो काण्डमा उनी एक्ला थिएनन् । तर आरोप मात्रै के लागेको थियो विरोधीहरुले खेदो खने ।
वाइडबडी प्रकरणमा दिवङ्गत मन्त्री अधिकारी साथै दुई पूर्व पर्यटनमन्त्री जीतेन्द्र नारायण देव र जीवनबहादुर शाहीलाई पनि दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाली कंग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत मुछिएका छन् ।
सामान्य अवस्थमा आलोचना गर्नुलाई अहिलेको समयमा गम्भीर विषयको रुपमा लिइदैन । तर उनी स्वर्गवास भएर अन्तिम संस्कारसमेत नभएको शोकको घडीमा पनि त्यस्ता विषय कोट्याएर नानाथरी भन्नेलाई पशु नभने के भन्ने ?
अधिकारी त्यस्ता नेता थिए जसलाई नेकपाको भविष्यको पार्टी अध्यक्ष र नेपालको प्रधानमन्त्री हुनसक्ने प्रबल सम्भावना रहेको व्यक्तिको रुपमा पनि लिइन्थ्यो ।
दुर्घटनापछि केही संचारमाध्यम पनि चिप्लिएको पाइयो । मृतकको नाम र तस्विर नै गलत प्रयोग गरिएको थियो । जतिसक्दो चाँडो समाचार प्रकाशन गरौँ भन्ने हतारोले नाम र तस्विर नै गलत परेको हुन सक्छ । तर यस्तो संवेदनशील विषयमा संचारकर्मीले पनि हेक्का राख्न सकेनन् ।
त्यसैगरी मृतकका तस्विरसहित श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै पोष्ट गरिएका तस्विरमा लाइक गर्नेहरुको संख्या धेरै देखियो । लाइकको अर्थ मन पर्यो भन्ने हुन्छ । तस्विर देख्नासाथ लाइक गर्ने बानी परेकाहरुले श्रद्धाञ्जलीका लागि हालिएको तस्विरमा स्याड संकेत थिच्ने मेसो नै पाएनन् ।
जायज प्रश्न र आशंका :
पाइलटसहित ६ सिटको हेलिकोप्टरमा ७ जना किन राखियो ? मौसम खराव हुँदाहुदै किन हेलिकप्टर उडाउन लगाइयो ? कस्तो अवस्थामा क्षमताभन्दा बढि लोड राखेर हेलिकोप्टर उडाउन मिल्छ ? यि र यस्तै प्रश्न सामाजिक सञ्जालमार्फत समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले उठाएका छन् । जसले आम सर्वसाधारणलाई समेत अन्यौल सिर्जना गरेको छ ।
कतिपयले हेलिकोप्टर दुर्घटना हुनुमा ओभर लोड वा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेका कारण हुनसक्ने आशंका गरेका छन् भने कतिले मौसम खराव हुँदाहँुदै जर्वजस्त उडान भर्न दवाब दिएका कारण दुर्घटना भएको हुनसक्ने तर्क गरेका छन् ।
आजको हेलिकप्टर दुर्घटनाको कारण यो पनि हो कि ?
डाइनेस्टी एयर हेलिकप्टर कम्पनीको वेबसाइटमा गएर हेर्दा तल दिईए अनुसार हेलिकप्टरमा पाइलट सहित ६ जनाको क्षमता भन्ने लेखेको छ. तर आजको दुर्घटनामा पाइलट सहित ७ जना भएको समाचार छ. यो कुराको पनि उत्तर खोज्नु पर्ला. कम्पनी कै वेबसाईटमा पाइलट सहित ६ जना बोक्ने भने को छ तर आज कसरी ७ जना बोक्यो ??? त्यसमा पनि ३,७०० मिटर भन्दा अग्लो पाथिभरामा गएको र खराब मौसम छ भनेर पाइलटले भन्दा भन्दै किन उडाएको??
डरका बारेमा चाणक्य के भन्छन्
संकट टाउकोमा आयो भने निर्दयी भएर आक्रमण गर्नुपर्छ । संकट भगाउने उपाय खोज्नुपर्छ । अर्काको